Dacwadda Dilka wiil Somali ah oo Maraykanka ka Bilaabatay – Radio Daljir
Nofeembar 11, 2015 3:38 b 0
Somalia, November 11, 2015-(Daljir)_ Xeer-ilaaliyaha Xafiiska Maxkamadda The Ramsey Count ee Gobalka Minnesotta ayaa waxay Dacwad dil ku soo oogtay Nin Maraykan ah oo lagu magacaabo Nyemah Rodney Kigee Kiyee, kaasi oo loo haysto dilkii Marxuum Axmed Ismail oo Sabtidii hore lagu dilay duleedka magaalladda Sant Paul.
Eedeysanaha oo 27-jir ayaa la sheegay inuu madaxa ka toogtay Marxuumka oo maalinta shalay (Talaado) la aasay.
Ilaaliye Ammaanka ayaa u sheegay Boliska inuu rumeysan yahay inuu Gacan-ku-dhiiglahaasi geystay dilkaasi.
Waxa uu intaasi ku daray inuu Gacan-ku-dhiiglaha u aqoonsaday ninkii toogashadda geystay bilowgii bishan November.
Gacan-ku-dhiiglaha, Nyemah Rodney Kigee Kiyee, waxaa kaloo uu ku eedysan yahay inuu daan ka jebiyey Nin kale oo Maraykan ah.
Dhinaca kale, Jaalliyadda Soomaalida ku nool Gobalka Minnesota ayaa waxay shalay ka qeyb galeen Aaska Marxuum Axmed oo 25-jir ah, waxayna muujiyeen inay ka xun yihiin sida gardaradda ee loo dilay Marxuumka.